Da'yarka Kooxaha Yurub U Waalanayaan Ee Erling Haaland Oo Soo Bandhigay Waxa Uu Ku Sameeyo Shantii Kubadood Ee Uu Shanta Saddexley Ku Dhaliyay. - Gool24.Net
November 13, 2019 Mahamoud Batalaale
Da’yarka aduunka xili ciyaareedkan ka yaabsadanaya ee Erling Braut Håland ayaa soo bandhigay sheeko xiiso badan iyo waxa uu ku sameeyo shantii kubbadood ee uu xili ciyaareedkan saddexleyada ku dhaliyay.
Erling Braut Håland oo 19 sano jir kaliya ah ayaa xili ciyaareedkan wacdaro layaableh ka dhigaya tartanka kooxaha Yurub ee Champions League iyo waliba horyaalka Austerian Bundesliga ee uu kooxdiisa Salzburg ku matalo.
Erling Braut Håland waxa uu ilaa hadda soo dhaliyay 15 gool oo horyaalka Austeria ah, 7 gool oo UEFA Champions League ah iyo 4 gool oo uu Austerian Cup kaga soo dhaliyay laba kulan oo kaliya, wuxuuna guud ahaan xili ciyaareedkan soo dhaliyay 26 gool.
In Erling Braut Håland uu 26 gool ku dhaliyay dhawrkii bilood ee xili ciyaareedkan ugu horeeyay waxay keentay in uu qabtay indhaha kooxaha Yurub ugu waa wayn.
Haddaba Erling Braut Håland ayaa ka hadlay arinta xiisaha leh ee waxa uu ku sameeyo shan kuboodood oo uu xili ciyaareedkan ka qaatay garoomada Yurub kadib markii uu saddexleyo cajiib ah dhaliyay.
Erling Braut Håland ayaa sheegay in shanta kubbadood ee uu saddexleyada ku dhaliyay ay isaga uga dhigan yihiin sidii ay saaxiibadiisa yihiin oo kale isla markaana uu dhamaantood ku seexdo habeen kastaba.
Isaga oo Erling Braut Håland ka hadlaya arintan ayuu yidhi: “Anigu waxaan ku seexdaa shantii kubbadood ee aan saddexleyada ku dhaliyay. Maalin kastaba iyaga ayaan eegaa, iyag oo saaxiibadahayga”.
Erling Braut Håland ayaa min shanta saddexley ee uu xili ciyaareedkan sida layaabka leh u soo dhaliyay waxa uu shabaqa kaga soo taabtay kooxaha kala ah Parndof, Wolfsberger, Hartberg, Genk iyo Wolfsberger.
Laakiin waxa uu sidoo kale goolal tartanka Champions League kaga dhaliyay kooxaha Liverpool iyo Napoli oo ay kooxdiisa Salzburg isku guruub yihiin.
Inkasta oo ay kooxaha Yurub ugu waa wayni hadda isha ku hayaan Erling Braut Håland oo si waali ah ku socda ayay haddana soo baxaan in lacagta lagu iibsan karaa ay si waali ah sare ugu kacayso.